SOMALI THINK TANK » Cilmaaniyiinta Cusub Iyo Cabsida Caruurta!
You are here: Home / Culture, Featured Articles, Politics, Religion / Cilmaaniyiinta Cusub Iyo Cabsida Caruurta!
Bishan sii dhamaanaysa waxaan aqriyay qoraal ku saabsan taariikhda iyo sababaha cilmiyaysan ee dabada ka riixaya baqdinta aan caqliga cuskanayn ee reer Galbeedka iyo cilmaaniyiinta cusub ka qabaan Islaamka ” Islamphopia.” Qoraalkan waxaa loogu tala galay dadka jecel in aqoonta-qallalan “Academia” kala soo dhex baxaan qodobo cilmiyaysan oo sharraxaya siyaabaha kala gedisan ee Aadanaha isku faquuqo iyo waliba midabyada kala duwan ee midabtakoorku yeesho.
Aqoonyahanka qoraalkan qoray waa bare-sare oo culuumta dhaqamada iyo isgaarsiinta ka dhiga Jaamacada North Illinois ee dalka Mareykanka. Qoraalkiisan wuxuu ugu magac-daray: Baqdinta- Islaamka, Dhaqanka, Iyo Midabka ee Waqtiga Imbiraadooriyadda (Islamphopia, Culture and Race in the Age of Impire.) Dooda ugu weyn ee qoraalkan gudbinayo waa in midabtakoorkii dunida ka jiri jiray lagu badalay dhaqan-faquuq maadama waqtigan casriga ah ee la joogo ay adagtahay in si toos ah dadka loogu takooro midabkooda dabiiciga ah ” racism.”
Bare-sare Mehdi wuxuu ku doodayaa in dawladaha reer galbeedka waligood ku mashquulsanaayeen siyaasad-goboleed ” geopolitical” saldhig looga dhigay aragti umadaha kale ku tilaamaysa in ay yihiin dad ku haboon in la darso, wax la baro, laga danaysto haddii ay suurta gal tahayna la gumeysto. Sida uu sheegay mudane Mehdi, doodan wuxuu u cuskaday aragtida caanka ah ee ” Orientalism” taas oo aqoonyahankii carbeed Edward Said uu curiyay qardhigii dhamaaday.
Aragtida “Orientalism” waxay qeexaysaa dabeecada hoose ee reer Galbeedka ku qaabilaan dhaqanada ka soo jeeda qaarada Asia gaar ahaan bariga dhexe. Dawladaha iyo aqoonyahanka reer galbeedka ayagoo ka duulaya aragtidan waxay duulaan gumeysi ah ku qaadeen madaxbannaanidii iyo aqoontii umahada ka soo jeeda dadka kale “ The Other.”
Mudane Mehdi qoraalkiisa wuxuu ku xusay in sababaha cilmiyaysan ee cabsida aan caqliga cuskanayn ee Islaamka laga qabo waqtigan la joogo laga dhex baadi goobi karo saddex xagalka kala ah: Dhaqanka, Midabka, iyo Qaabka cusub ee isbahaysiga dawladaha galbeedka ku doonayaan in dunida lagu maamulo “ The Age of Impire”.
Sida uu qabo mudane Mehdi, Isbahaysigan cusub “ Empire” wuxuu marwalba adeegsadaa farsamo cusub oo aragtida “ Orientalism” looga shidaal qaatay. Tusaale ahaan, waqtigii dagaalada qabooba socdeen, “ Cold War” isbahaysiga hadda dunida ka taliya wuxuu sharta iyo shaydaanimada u xawilay xagaa iyo midowgii soofiyeetka. Waqtigaas waxaa waajib muqadas ah ahaa in lala dagaalamo shuuciyadda oo dunida si xawli ah ugu faafeysay.
Markii daaqada lagala baxay xoogii shuuciyada oo midowgii dowladihii soofiyeetka burbureen, Isbahaysiga hadda dunida hor booda wuxuu baadigoob ugu dhaqaaqay faquuqida dhaqamada aduunka ee laga yaabo in ay ka horimaadaan siyaasadda is habaysiga. Faquuqa noocan ah waxaa loo cuskaday isla aragtida duuga ah ee “ Orientalism” ee kor aan ku soo xusnay. Waqtigan waxaa bilowday in duulaan af iyo adin ah lagu qaado qaababka ay u noolyihiin dadyowga loo arko in aysan asal ahaan ka tirsanayn isbahaysiga.
Bare-sare Mehdi wuxu qoraalkiisa ku qaada dhigayaa sida midabtakoorkii dunida laga yaqaanay qarniyadii hore iskugu badalay dhaqan-takoor. Tusaale ahaan waqtiyadii gumeysiga ee qarnigii dhamaaday, isbahaysiga dunida ka taliya wuxuu midabtakoor iyo faquuqid kula dhaqaaqi jiray dadka loo arko in midab ahaan madowyihiin. Dadaal badan oo lagalay ka dib, faquuqida noocan ah waa socon weysay, wuxuuna isbahaysiga go’aansaday in midabtakoorka iyo gumeysiga lagu badalo madax bannaani magac ah.
Sida uu qabo mudane Mehdi, dhaqantakoorka badalay midabtakoorka wuxuu xoogaystay billowgii qarnigan. Tusaale ahaan, qarnigan waxaa la arkay dawladaha reer galbeedka oo quursanaya qaababka ay u noolyihiin ama u dhaqmaan bulshooyinka kale. Waxaa warbaahinta dunida lagu arkay duulaan af ah oo lagu quursanayo qaababka ay u labistaan, ama isku guursadaan dadka aragtida “ orientalism” looga qoondeeyay khaanada lagu magacaabo kuwa-naga duwan “ the other.”
Wixii ka danbeeyay qaraxyadii September 11, Islaamka iyo muslimiinta ayaa noqday mowduuc xiiso gaar ah leh oo isbahaysiga ku bartilmaamaysan karo dhaqan-faquuq loo cuskaday aragtida “Orientalism.” Mudane Mehdi wuxuu ka soo horjeeda in sababaha ka danbeeya dhibaatada dunida ka tagan, gaar ahaan dhibaatada argagaxisnimada laga baadi goobo dhaqamada iyo diimaha.
Tusaale ahaan, mudane Mehdi wuxuu ku talinayaa in sababaha rasmiga ah ee qalaalasaha taagan qarnigan la joogo laga baadi goobi karo siyaasadda guud isbahaysiga dunida ka taliya iyo tartarnka loogu jiro kheyraadka dabiiciga ah ee aduunka
Doodan waa dood xoog badan oo xiiso gaar ah leh, waayo mudane Mehdi wuxuu qoraalkan ku qaada dhigayaa in siyaasadda cusub ee isbahaysiga u xuubsiibatay aragti ah in dhaqamada dunida isla jaan qaadi karin oo ay qasab tahay in dhaqamada qaar laga takhaluso. Haddaba aragtidan ayaa ah sababta qarsoon ee Islaam ka-cabsiga cusub “ Islamphopia” gadaal ka riixaysa. Maadaama aysan macquul ahayn in dadka degan bariga-dhexe midabtakoor toos ah loo muujiyo, isbahaysiga wuxuu door biday in siyaasad dhaqan-faquuq ah la cuskado.
Dhanka kale, mudane Mehdi wuxuu qoraalkan kula garramayaa cilmaaniyiinta cusub ee sida duuduubka ah u liqay dooda isbahaysiga “ Impire” ee ku baaqaysa in Islaamka iyo muslimiinta shaqo adag laga qabto maadama ay shido ka wadaan aduunka. In dooda noocan ah si duuduub ah la iskaga liqo ayuu mudane Mehdi ku tilmaamay caruurnimo iyo caajis maskaxed. Dhanka kale, mudane Mehdi wuxuu qabaa in cilmaaniyiinta cusub ee doonaya in la fuliyo siyaasadda Isbahaysiga ee dhaqamada muslimiinta lagu faquuqayo in ay wax ka bartaan aqoonta –qallalan iyo taariikhda aduunka
Tusale ahaan, mudane Mehdi wuxuu ku doodayaa in ay caajisnimo maskaxeed tahay in muslimiinta iyo islaamka lagaliyo hal-khaanad waayo muslimiinta adduunka waxay u nooyihiin malaayin nooc oo la jaan qaadaya duruufaha ka jira degaanka ay ku noolyihiin. Sida daraaadeed mudane Mehdi wuxuu aaminsanyahay in aysan maan-gal ahayn, in cilmaaniyiinta cusub duuduub u liqaan siyaasad iyo sumad lagu quursanayo dhaqamada iyo diinta umad bilyan ka badan.
Gaba-gabadii, mudane Mehdi wuxuu cilmaaniyiinta cusub kula talinayaa in ay ka caafimaadaan cabsida caruurnimo ee caqliga aan ku dhisnayn ee ku wajahan Islaamka iyo Muslimiinta. Sida fudud ee looga caafimaadi karo cabsida noocan ah ayuu mudane Mehdi ku sheegay in wax laga barto sida midabtakoorkii loogu badalay dhaqan-faquuq iyo taariikhda aragtida duuga ah ee “ Orientalism” ee saldhiga looga dhigay siyaasadaha isbahaysiga reer galbeedka “ The Impire”!
Source: Mehdi Semati. (2010). “Islamophobia, Culture and Race in the Age of Empire.” Cultural Studies 24(2), 256-75.